Lahatsoratra nataon'i Michael Doane momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Michael Doane
Michael Doane dia mpanoratra, mpivarotra ary mpamorona tranonkala izay raiki-pitia tamin'ny sehatry ny hetsika. amin'ny CadmiumCD mampianatra ireo mpandrafitra hetsika momba ny tombotsoan'ny Event Tech izy. Makà dika mitovy aminy Fandrosoana amin'ny Tech Tech, hianaranao ny fomba ahafahan'ny Event Tech mandrindra ny hetsika B2B anao.
Talata, Septambra 26, 2017 Talata, Septambra 26, 2017 Michael Doane
Vaovao ao amin'ny Martech Stack-nao: Rindrambaiko hetsika fitantanana hetsika Ireo mpivarotra hetsika sy mpivarotra dia be ny mila sahirana. Ny fitadiavana mpandahateny mahay, ny famoahana atiny mahafinaritra, ny fivarotana sponsorship, ary ny fanomezana traikefa ananan'ny mpanatrika tsy manam-paharoa dia misy ampahany kely amin'ny hetsika isan'andro. Mbola hetsika fanaovan-javatra maharitra fotoana be ihany izy ireo. Izany no antony mahatonga ireo mpikarakara hetsika B2B hampitombo ny Event Tech ao amin'ny stack Martech. Tao amin'ny CadmiumCD, nandany sy nandoko 17 taona mahery izahay